Eye Care – Page4– Healthy Life Journal
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. မျက်စိက ကြည့်လိုက်လို့ နှစ်ထပ်မြင်နေတဲ့အကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ A. မျက်စိကကြည့်လိုက်လို့ နှစ်ထပ်မြင်နေတာ (Double Vision)ကို Diplopia လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ နှစ်ထပ်မြင်တဲ့ အနေအထားမှာ...
အိပ်ရေးပျက်ရင် မျက်ကြောတွေ နီနေပါတယ် . . .
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း(မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. မျက်စိကျန်းမာရေးဟာ အမြဲတမ်းကောင်းနေဖို့ဆိုရင် အိပ်ရေးဝခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား။ တချို့လူတွေမှာ အိပ်ရေးပျက်ရင် မျက်ကြောတွေ နီနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ DawKhin(FB) A. အိပ်ရေးဝနေတာနဲ့ မျက်စိကျန်းမာရေးကလည်း သွယ်ဝိုက်ပြီးဆက်စပ်နေပါတယ်။ အိပ်ရေးဝရင် လူကလန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိတော့...
မျက်ခွံလေးသလိုလို၊ ပိသလိုလို ခံစားရတာက မျက်စိပြဿနာနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိ/မရှိ . . .
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. မျက်ခွံလေးသလိုလို၊ ပိသလိုလို ခံစားရတာက မျက်စိပြဿနာနဲ့ ဆက်စပ်နေပါသလား။ NN(FB) A. မျက်ခွံလေးတာကတော့ မျက်စိညောင်းလို့ ဖြစ်တာပါပဲ။ မျက်စိကို နားနားနေနေ သုံးလိုက်ရင် ပြဿနာမရှိပါဘူး။ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာ မျက်ခွံလေးတာက...
တစ်ခုခုကိုကြည့်ရင်းနဲ့ မျက်စိထဲက မျက်ရည်တွေ ကျလာပါတယ် . . .
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း(မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. တစ်ခါတလေ တစ်ခုခုကိုကြည့်ရင်းနဲ့ မျက်စိထဲက မျက်ရည်တွေ ကျလာပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ သက်သာအောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်လို့ ရပါသလဲ။ KKS (FB) A. တစ်ခုခုကိုကြည့်ရင်းနဲ့ မျက်စိထဲက မျက်ရည်တွေ ကျလာတာက အဓိကက...
အသက်ကြီးတဲ့အထိ မျက်စိမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာ မကျရောက်အောင် . . .
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. အသက်ကြီးတဲ့အထိ မျက်စိမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာ မကျရောက်အောင် ဘယ်လိုအချက်တွေ အဓိက လိုက်နာသင့်ပါသလဲ။ UT(FB) A. အသက်ကြီးတဲ့အခါ မျက်စိမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာအနေနဲ့ အဓိက ကျရောက်တတ်တာက အတွင်းတိမ်ရောဂါပါ။ အတွင်းတိမ်က...
မျက်ရည်နည်းပြီး မျက်စိခြောက်သွေ့ရင် ဘယ်လိုကုသနိုင်ပါသလဲ . . .(Dry Eye)
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. မျက်စိခြောက်သွေ့ခြင်းအကြောင်း ရှင်းပြပေးပါ ဆရာ။ A. မျက်စိခြောက်သွေ့တယ်ဆိုတာ မျက်စိက မျက်ရည်မထွက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ခေါ်တာပါ။ မျက်စိမှာရှိတဲ့ အချွဲ(mucin)ထွက်တဲ့ Conjunctival Goblet Cells ရယ်၊ ရေထု(Aqueous Layer)...
မျက်ခွံလှုပ်ခြင်း (Eye twitching)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မျက်ခွံလှုပ်တာဟာ ဆက်တိုက်လှုပ်နေတာဖြစ်ပေမဲ့ ဆေးပညာမှာ Benign လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်စရာတော့မရှိပါ။ ကျန်းမာရေး နောက်ခံတခုခုကနေတော့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ခက်တာက ပျောက်အောင်ကုဖို့ခက်တာ ဖြစ်နေတယ်။ Stress စိတ်ဖိအားများနေခြင်း၊ Tiredness မောပန်းနေခြင်း၊ Eye strain မျက်စိအသုံးပြုတာ များသွားခြင်း၊...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. မျက်စိထဲက ဘာကြောင့်သွေးထွက်ရတတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. သွေးထွက်တယ်ဆိုတာ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင် သွေးကြောတစ်ခုကပေါက်သွားလို့ သွေးထွက်တဲ့အခြေအနေပါ။ သွေးထွက်တာက ဒဏ်ရာရလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် မျက်ခွံမှာလည်း သွေးခဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ မျက်မြှေးမှာလည်း...
ပိုးကြောင့် မျက်တောင်ရောင်ခြင်း ရောင်ရမ်းခြင်း
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. မျက်တောင်ရောင်တာက ဘာကြောင့် ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ A. မျက်တောင်ရောင်တာမှာ အဓိကအကြောင်းရင်း နှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုက Staphylococcal Blepharitis ပါ။ စတပ်ဖိုင်လိုကော့ကပ်စ် ရောဂါပိုးကြောင့် မျက်တောင်ရောင်တာလို့...